PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-29 - Impahla yangaphantsi yamadoda mayingabonwa!
Impahla yangaphantsi yamadoda mayingabonwa!
KAPA: UMNTU ngamnye unendlela ekhethekileyo yokunxiba neyohlukileyo kwindlela abanye abantu abanxiba ngayo.
Isinxibo somntu ngamnye sikuzobela umfanekiso ngqondweni sikuxelela ukuba ungumntu onjani yaye yeyiphi indlela aphila ngayo.
Kungoku nje kukho iqela elizibiza ukuba yiGeneral Brotherhood elinxiba ngendlela etsala umdla ekubuyisela emva kwiintsuku zamandulo ngethuba ootatomkhulu babehlala ezinkomponi nasezihostele, nalapho kwakunqabile ukubona umntu wasetyhini.
La ngamadoda angamanene angahlalwa nayimpukane, nendlela akhangeleka ngayo kuyacaca ukuba aphuma kumakhaya afudumeleyo, yaye anendlela eyahlukileyo xa ehamba ayawucenga umhlaba ngesidima nesithozela.
La madoda uyakuwabona ngokunxiba iihempe, neekepusi zesikhotshi kwaneebhulukwe ezicwebezelayo ezinezembe eligeca iimpukane logama izihlangu zawo zimenyezela, ungafunga ukuba awanyatheli ngazo phantsi.
“Iimpahla zangaphantsi ezinxitywa ngamadoda akubalulekanga ukuba zibonwe nguwonkewonke kuba oko kubonakalisa ubuze bawo,” utshilo uRoler Ntsenge, 62, ophuma kulo mbutho iGeneral Brotherhood.
Esitsho ukuba abaququzeleli ukuba abantu banxibe ngohlobo lwabo, koko indoda mayinxibe isinxibo ngokufanelekileyo kungaveli iimpahla zangaphantsi esidlangalaleni.
UNtsenge uthi kuyaxhalabisa ukubona abantwana abangamadodana betebhise iibhulukhwe ze kuvele impahla yangaphantsi.
Uthi baliqela lamadoda angaphaya kwamashumi amabini anesihlanu, baqale ukudibana kunyaka ophelileyo.
OkaNtsenge uthi injongo yeGeneral Brotherhood kukwakha amakhaya afudumeleyo, ukunciphisa iziganeko zempatho-gadalala ejoliswe kumanina nabantwana.
Ekwatsho kananjalo ukuba ilizwe lonakele, ngelithi kufikelele ixesha lokuba amadoda aqokelelane angoyikwa koko ahlonitshwe ngezenzo zawo ezihle.
La madoda achule ukunyathela ejikeleza izitalato zaseSamora Machel ePhilippi, ebonisa ngendlela anxiba ngayo.
Lo mboniso ububanjwe ngoMgqibelo umhla weshumi kule iphezulu.
Oku kutsale umdla ngokubanzi kubahlali, bambi bangenelela behamba nala madoda.
Eli qela lamadoda lixelele I’solezwe ukuba likwathatha inxaxheba linqwanqwada abafana abasakhulayo ngemiba yokubakhulisa baphuhle babe ngamadoda okwenene.
UNtsenge uthi babamba iindibano apho bashukuxa khona imiba ebalulekileyo yokwakha nokukhulisa amakhaya abo.
Uthi oko akupheleli nje apho, koko naxa umntu ehlelwe sisehlo baye bancedisane naye ukuqabelisa lo mcimbi kungenjalo ingxaki leyo ajamelene nayo.
Woleke umsundulu ngelithi bazama ukubuyisa umoya wobuntu nadiza ukuba ngoku bona banezihlobo ezohlukeneyo phantse lonke kweli leKapa, nathi oko kubangela ukuba kube lula ukuba umhlobo wakho akwazi akuhlangule xa ugaxeleke engozini kwindawo leyo ubutyelele kuyo.
Ezi ndibano zibanjwa kumakhaya abo kwiindawo ezohlukeneyo ngelizama ukwakha ubuhlobo nobuntu.
UMFANEKIOS: PHINDA KULA
Iqela lamadoda azibiza iGeneral Brotherhood ethe ePhiliphi